News – Page 953 – Puntland Voice
Magaalada Muqdisho oo saaka guda gashay maalintii 6aad oo dagaalo ah
Muqdisho (AB):-Dhinacyada ku dagaalamaya Magaalada Muqdisho ayaa saaka waabarigii hore halkoodii ka sii waday dagaalo taxane ahaa oo 5-tii maalin ee la soo dhaafaybay socda. Dagaalka oo saaka maalintii 6aad lugta la galay ayaa xoogiisu ka dhacayaa halkii xalay uu […]
Ra'iisulwasaaree Cumar C/rashiid oo shaaca ka qaaday inay qaadayaan weeraradii ay hore u sheegi jireen inay Magaalada oo dhan kaga saarayaan xoogaga ka soo horjeeda
Muqdisho (AB):-Ra’iisulwasaaraha Dowlada KMG Soomaaliya dr.Cumar C/rashiid Cali Sharmaake ayaa daboolka ka qaaday inay ciidamada Dowlada adeegsan doonaan awoodooda u keydan islamarkaana ay fulin doonaan weeraradii ay hore dowladu sheegtay inay Muqdisho kaga saarayaanm xoogaga ka soo horjeeda. Ra’iisulwasaaraha oo […]
Afhayeenka Ciidamada Xarakada Alshabaab oo guulo ka sheegtay dagaaladii cuslaaa ee shalay galab Muqdisho ka dhacay.
Muqdisho (AB):-Sheekh C/casiis Abuu Muscab oo ah afhayeenka xarakada Mujaahidiinta Alshabaab ayaa xalay saxaafada u sheegay inay guulo ka gaareen dagaalkii shalay galab ilaa xalay maqribkii soo gaaray ee ka dhacay wadada isku xirta isgoysyada debka iyo bakaaraha. Afhayeenku wuxuu […]
Afhayeenka Xarakada Alshabaab oo maanta uga digay ganacsatada Soomaalida inay hoteelada ka kireeyaan qof kasta oo xubin ka ah Dowlada
Muqdisho (AB):-Afhayeenka Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab Sheekh Cali Maxamuud Raage (dheere) ayaa maanta uga digay Gancsatada gaar ahaan kuwa Hoteelada leh inay soo dhaweynstaan xubnha Dowlada Madaxweyne Shariif ku jira oo ay Hoteeladooda ka kireeyaan. Sheekh Cali dheere oo ka qeybgalay […]
Ciidamo Itoobiyaan ah oo Maanta soo gaaray dibna uga laabtay Deegaanka Kalabeyr
Baladweyne (AB):-Wararka ka imaanaya Deegaanka Kalabeyr ee duleedka Magaalada Baladweyne ayaa sheegaya in halkaasi ay maanta soo gaareen Ciidamo Itoobioyaan iyo kuwo Soomaali ah oo la socday. Deegaanka Kala beyr oo dhanka waqooyi kaga beegan 25 KM magaalada Baladweyne ee […]
Haweney Soomaali ah oo hore loogu eedeeyay afduub diyaaradeed oo xukun lagu riday
Maxkamad ku taal Dowlada Dalka New Zealand ayaa xukuin ku riday Haweeney Soomaaliyeed oo loo haystay isku day ay ku afduuban rabtay diyaarad dalkaaasi laga leeyahay. Haweeneyda oo magaceeda lagu sheegay Caasho Cali Cabdala ayaa ugu danbeyn lagu xulumay 8 […]
Wasiirada Dowlada KMG oo Maanta ka shiray arimo ku saabsan dhanka amaanka
Muqdisho (AB):-Kulan uu shir gudoominayay Ra’iisulwasaaraha Dowlada KMG Soomaaliya Cumr C/rashiid ayay maanta Madaxtooyada ku yeesheen Golaha wasiirada Dowlada. Shirkaasi oo ahaa mid albaabada u xiran yihiin islamarkaana looga hadlayay arimo u badan dhanka amaanka ayaa waxaa shirka kadib waxaa saxaafada […]
Qaramada Midoobey oo eregy cusub u magacowday la dagaalanka burcad badeeda Soomaaliya.
Xoghayaha guud ee qaramada Midoobeyu Mr.Banki Moon ayaa magacaabay ergey cusub oo wakiil uga noqon doona arimaha Burcad badeeda Soomaaliya. Wakiilkaani cusub oo hore wasiir uga soo noqday dalka Faransiiska ayaa lagu wadaa inuu ka shaqeeyo sidii loo heli lahaa […]
Maamulka Degmada Jalalaqsi oo amaro cusub dul dhigay Ganacsatada degmadaasi
Maamulka Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab ee Degmada Jalalaqsi ayaa Maanta awaamiir cusub dul dhigay ganacsatada marka la eego waxa ay ka ganacsnayaan gaar ahaan xaga raashinka. Guud ahaan ganacsatada ayaa looga digay inaan lagu arki karin ganacsade iibinaya raashin ay ku […]
Warsaxafadeed maanta ka soo baxay wasaarada Warfaafinta oo looga hadlay khasaaraha shacabka ka soo gaaray dagaaladii maalmahaan ka dhacayay Muqdisho
Muqdisho (AB):-War saxaafadeed uu ku saxiixan yahay Wasirika Warfaafinta Dowlada KMG Soomaaliya C/raxmaan Yariisow ayaa ku shaarxay khasaaraha shacabka ka soo gaaray dagaaladii maalmahaan danbe ka socday Muqdisho. Ing.Yariisow oo sharaxaad ka bixinayay dadka ku geeriyooday dagaaladaasi ayaa ku bilaabay […]